ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Shenzhen Chance Technology Co. , Ltd.
ထိတွေ့နိုင်သော panel နှင့်အတူ IPS-TFT LCD MODULES
ထိတွေ့နိုင်သော PANEL ဖြင့် TN-TFT LCD MODULES
Shenzhen Chance Technology Co, Ltd. သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Matrix Crystal Technology (Shenzhen) Co. , Ltd ၏ရေခြားမြေခြားအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀.၉၆ မှ ၁၃.၃ အထိ LCD မျက်နှာပြင်ငယ်များဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ၁၃ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ , E- စက္ကူ, OLED display ကို။ COG + FOG စက်များ၊ ကော်ဆေးပေးစက်များ၊ BL တပ်ဆင်ရေးစက်များစသည်တို့ဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ၆ ခုရှိသည်။ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်း ၁၀ ဦး နှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ထမ်း ၂၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အထွတ်အထိပ်အချိန်၌ 100K pcs LCD modules များကိုတစ်နေ့လျှင် ၀ န်ထမ်း ၄၀၀ ခန့်ကပြီးစီးစေသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောဖန်သားပြင်များကိုပေးရန်၊ စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရန်သုံးစွဲသူများအားကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကဏ္ aspects တိုင်း၌အရည်အသွေးကိုမြင့်မားစွာအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် AUO, Innolux, CPT, LG နှင့် Hitachi စသည့်အဆင့်မြင့်ပေးသွင်းသူများကိုရွေးချယ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရန် ၀ န်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်။ ဖောက်သည်များကိုစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗဟုသုတများဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အရောင်း ၀ န်ထမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့ကျင့်ပါသည်။
ချန့်စ်သည်ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီများအတွက် BYD, TCL, DJN များအတွက်အဓိကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီး၊ ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုတိုးပွားစေသည်။
၁။ OLED display effect ဖြင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ LCM ဖြစ်သော်လည်းဈေးသက်သာပါသည်။
၂။ LCD ဖန်သားပြင်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ၁၃ နှစ်အတွေ့အကြုံ။
ထောက်ပံ့ 3. ထူးခြားတဲ့ display တွေ။
4.6ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ။ အရည်အသွေးပြည့်အသင်းအတွက် 10+ န်ထမ်း။
တုံ့ပြန်မှု ၆ ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှု။ ပို့ရန်အချိန်တို
၃ / F၊ တတိယအဆောက်အ ဦး၊ Jia'anda စက်မှုဥယျာဉ်၊ Longhua ခရိုင်၊ Shenzhen, China
ယခုငါတို့ကိုခေါ်ဆိုပါ - 18146681518